Philippines: “Fifanaraham-panambadiana azo havaozina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2010 14:49 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Español, bahasa Indonesia, English
Vondrona politika iray ao Philippines no maniry hampiditra volavolan-dalàna mametraka ny fetram-pifanaraham-panambadiana iray ho manankery mandritry ny folo taona. Ity tolo-dalàna tokana an-tany ity no valin-kafatra nasetrin'io vondrona io ny fahelana sy ny fahasarotan'ny famonoana sora-panambadiana any amin'ity firenena ity. Philippines, izay ny Katolika no betsaka indrindra, dia tsy manana lalàna momba ny fisarahana.
Raha araka ity vondrona ity, ilay “Fifanaraham-panambadiana azo avaozina” dia “hisoroka ny fandaniana noho ny halavan'ny pitsopitsony tsy maintsy ataony mialohan'ny hanafoanana ny fanambadiany ho an'ireo olona tsy mifanaraka”. Ampian'ilay vondrona hoe ny fifanaraham-panambadiana iray dia “tokony ho toy ny passport na fahazoan-dàlana mamily fiara ihany. Rehefa tsy maharototra antsika ny hanavao azy, dia lany andro izy izay.”
Isan-taona dia maherin'ny 500,000 ny fampakaram-bady amasinin'ny Fiangonana Katolika ka latsaky ny 10 isan-jato no nofoanana.
Mpanoratra ho an'ny Lex Fori Philippines, i Oscar dia manoritsoritra ny fiantraikan'ilay tolo-dalàna eo amin'ny harena niaraha-nihary.
Ny an'i John Odonnell R. Petalcorin dia aleony kosa lalàna iray afaka manalefaka ny vesatry ny fanafoanana sora-panambadiana.
Ice9web Blog dia manontany tena raha mety hisy firariantsoa am-panambadiana iray vaovao hanjary lasitra mandritry ireo fampakàrana.
Pinoy Politico dia tsy mahzao intsony hoe fa nahoana ny olona roa tsy mifanara-tsaina no voatery hiandry folo taona alohan'ny hahafahan'izy ireo mamàrana ny fanambadiany
Capt. Nemo dia mpandàla ilay tolo-dalàna
Manahy kosa i Jappysworld ny amin'ny ho firindran'ny fiainan'ny ankizy raha ity, hono, ka manapa-kevitra ny tsy hanohy intsony ny tokantranony izy ireo
Mihevitra i Maureen Flores fa manitsakitsaka ny maha-zava-masina ny fanambadiana ilay tolo-dalàna